Global Voices teny Malagasy » Fianakaviana mitahiry ny fahatsiarovana ilay mpiasa maty nandritra ny didy jadona tao Brezila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Desambra 2019 5:24 GMT 1	 · Mpanoratra Agência Mural Nandika (en) i Liam Anderson, Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Tamin'io andro io, teo afovoan'ny vahoaka miisa 30000, dia tao anaty fiara niaraka tamin'ny Arsevekan'i São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, ry zareo, teny an-dalana ho any Sé Cathedral. Tao no nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny lanonana fandevenana ny rain'izy ireo, Santo Dias , izay maty iray andro mialoha ny fihetsiketsehan'ny mpiasa.
Ary amin'ny maha-mpitarika sendika azy, dia niasa ho mpitarika vondrom-piarahamonina ihany koa izy niaraka tamin'ny vadiny, Ana Dias, tao amin'ny manodidina an'i Vila Remo izay nonenan-dry zareo, tao amin'ny distrikan'i Jardim Ângela, atsimon'ny renivohitra ihany koa i Santo Dias, ary mpikambana tao amin'ny Workers’ Pastoral .
Tamin'ny fotoana nahafaty an'i Santo Dias, 15 taona no nandalo lasa hatramin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika  tamin'ny taona 1964 izay nanala ny filoha João Goulart . Nentin'ny jeneraly João Baptista Figueiredo  ny firenena, tamin'ny fotoana nanombohana ny adihevitra momba ny fisokafana  ara-politika sy ny famerenana ny demokrasia. Na izany aza, efa tamin'ny taona 1985, enina taona taty aoriana, vao nisy sivily  indray hitana ny fiadidiana ny filoham-pirenena.
Ho an'i Luciana Dias, ilaina ny vondrona mba tsy ho very an-javony ny tantaran'ny rainy. “Feo iray nampanginin'ny  fitondrana jadona izy, ary manana zavatra marobe holazaina hatrany ny feo nampanginina,” hoy izy.
Ny sabotsy 26 Oktobra, ohatra, dia nankany amin'ny tanàna São José dos Campos, adiny iray mandeha fiara miainga avy any São Paulo i Santinho mba handray anjara amin'ny hetsika iray nataon'ny Sendikan'ny mpitondra fiara ho fanomezam-boninahitra ny rainy. Mandritra izany fotoana izany, Luciana kosa nankany amin'ny Tsangambatom-Pahatsiarovana ny Fifaharana  any afovoan'i São Paulo, izay foibe famonjana tamin'ny didy jadona, mba handraisana anjara amin'ny famoahana ny andiany faharoa amin'ny boky biografika “Santo Dias: “Rehefa lasa ho Tantara ny lasa.”
Rehefa nanontaniana ny fomba nandraisan'ny tanora avy any amin'ny faritra manodidina anjara tamin'ny famelomana ny fahatsiarovana ny rainy i Luciana dia nahatsiahy ny seho an-tsehatra tamin'ny volana Febroary, seho izay mifototra amin'ny biografian'ny rainy, nokarakarain'ny vondrona tanora avy amin'ny Orinasan-kolontsaina Capão Redondo , ao atsimon'i Sao Paulo.
Nijery ny “Os Santos Dias do Capão “, notontosain'i Ícaro Rodrigues, 34 taona tao amin'ny Cia. Mungunzá ao afovoan'i São Paulo i Luciana. Rehefa nampahafantarina ireo tanora mpilalao izy tamin'ny fiafaran'ny seho, dia nilaza izy fa gaga ry zareo ary nisaotra azy tamin'ny fanatrehana, tao anatin'ny ranomaso sy tsiky. “Tena nampihetsi-po izany,” hoy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/29/146071/
 Arsevekan'i : https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Evaristo_Arns
 Santo Dias: http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/mortos-desaparecidos/santos-dias
 Workers’ Pastoral: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastoral_Oper%C3%A1ria
 didy jadona miaramila : https://www.agenciamural.org.br/como-o-ai5-afetou-periferias-de-sao-paulo/
 fanonganam-panjakana nataon'ny tafika: https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_no_Brasil_em_1964
 João Goulart: https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
 João Baptista Figueiredo: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Figueiredo
 Tsangambatom-Pahatsiarovana ny Fifaharana: http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/
 Orinasan-kolontsaina Capão Redondo: http://www.fabricasdecultura.org.br/fabrica/capao-redondo
 Os Santos Dias do Capão: https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=104231
 pejy : https://cmpmboicp.wixsite.com/santo-dias